ဆာလကျ Vs မကျဆီ Vs ရျောနယျဒို – ဆာလကျက လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဖွဈနပွေီလား? – Play Maker Sports Journal
မိုဟာမကျဆာလကျရဲ့မှတျတမျးကို လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားတှလေို့ အားလုံးကယူဆထားတဲ့မကျဆီနှငျ့ရျောနယျဒိုတို့ရဲ့မှတျတမျးနဲ့နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါမယျ။
လီဗာပူးစတားဟာဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှုအပိုငျးမှာမကျဆီနှငျ့ရျောနယျဒိုတို့ထကျမြားပမေယျ့၂၀.၅ ရာခိုငျနှုနျးသာအောငျမွငျမှုရှိပါတယျ။မကျဆီနှငျ့ရျောနယျဒိုတို့ကတော့၁၃.၇ ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့၁၇.၂ရာခိုငျနှုနျးစီသာရှိပါတယျ။
ဆာလက် Vs မက်ဆီ Vs ရော်နယ်ဒို – ဆာလက်က လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်နေပြီလား?
မိုဟာမက်ဆာလက်ရဲ့မှတ်တမ်းကို လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေလို့ အားလုံးကယူဆထားတဲ့မက်ဆီနှင့်ရော်နယ်ဒိုတို့ရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမယ်။
လီဗာပူးစတားဟာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုအပိုင်းမှာမက်ဆီနှင့်ရော်နယ်ဒိုတို့ထက်များပေမယ့်၂၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းသာအောင်မြင်မှုရှိပါတယ်။မက်ဆီနှင့်ရော်နယ်ဒိုတို့ကတော့၁၃.၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်၁၇.၂ရာခိုင်နှုန်းစီသာရှိပါတယ်။